AMBADIKY NY EPP TODIVELONA RAPHAEL : Miakatra hatrany an-tokantrano ny rano eny Andranomadio
Mitohy hatrany ny fikijan’ny orana eto Toamasina, taorian’ny fandalovan’ny rivo-doza Enawo farany teo iny. 20 mars 2017
Ny faran’ny herinandro teo, nitombo avy roa heny ny fikijany. Mitondra faisana voalohany ireo faritra iva, toy ny any Mangarano faharoa iny, ny toerana sasany ao Ambolomadinika, ary ny any Andranomadio.
Ao amin’ity farany no tena hita voa mafy, toy ny ao ambadiky ny EPP Todivelona Raphael. Tafahoatra ny zava-misy : miaina ao anaty ranobe ny trano maromaro, indrindra ny manodidina tatatra iray lehibe avy eny amin’ny tsena Ankirihiry, mamakivaky ity fokontany iray ity. Fijaliana ny an’ireto tokantrano dibo-drano ireto : hatreo amin’ny sisim-pandriana ny rano ary manahy mafy izy ireo sao lasan’ny rano izy ireo amin’ny alina, asesiky ny torimaso be loatra.Ailiky ny mponina any amin’ny Kaominina ny rihitra.
“Tokony hisy ny ezaka atao amin’ny fanokafana ireo tatatra tototry ny fako fa tsentsina eny an-toerana sy izay tatatra hikorinan’ny rano avy amin’ity fokontany ity”, hoy izy ireo. Ny tena olana iray goavana, hoy ny fokonolona ireto dia ny fanorenan-trano eo ambony tatatra, ka miteraka ny fitohanan’ny rano ary izao izy lasa an-tranon’olona izao. Manoloana izany rehetra izany, tra-boina tsy fidiny ireto vahoaka ireto ary manaitra ny sain’ny tompon’andraikitra mba hijery akaiky izao voina mahazo azy ireo izao ny fokonolona amin’ity toerana ity.